Ikhehla nesalukazi bakhishiswe okwezingcanga endlini yomndeni - Ilanga News
Home Izindaba Ikhehla nesalukazi bakhishiswe okwezingcanga endlini yomndeni
Ikhehla nesalukazi bakhishiswe okwezingcanga endlini yomndeni
Kuthiwa izimpahla zabo zisakazwe egcekeni kwabulawa iminyango namawindi
KUBE wusizi lodwa uMnu Boy Mlaba noNkz Thoko Mkhize bekhishiswa okwezilwane endlini asebehlale kuyona iminyaka ngoba kuthiwa usudayisiwe.
ISIHLUKU ikhehla nesalukazi base-Unit 1 North, eHammarsdale bekhishiswa okwezingcanga endlini yomndeni okuthiwa ibiza uhulumeni kwabulawa amawindi neminyango ngoLwesibili, izimpahla zabo zasakazwa egcekeni ngoba kuthiwa kunelungu lomndeni eseliyidayisele umakhelwane wabo.
UMnu Boy Mlaba (72) nowakwakhe, uNkz Thoko Mkhize (73), kushone elangoLwesibili bengazi ukuthi bazowafihlaphi amakhanda, okwenze ikhehla laze labuza kowakwalo ukuthi: “Sizolalaphi namhlanje ntambama.”
Ngokuthola kweLANGA, lo mndeni usuhlale kule ndlu iminyaka engaphezu kwewu-20, kanti kuthiwa idayiswe ngumfowabo ka-Mnu Mlaba onomuzi wakhe eHarrismith.
Kudingeke ukuba uMnu Mlaba noNkz Mkhize bacele ukulala kwamakhelwane emuva kokuba umfowabo kaMnu Mlaba kuthiwa ufike nabantu abangaziwa, bamkhiphela ngaphandle qede bakhipha amafasitela nezicabha.
Kubikwa ukuthi sekunesikhathi udaba lokudayiswa kwale ndlu lukhulunywa njengoba luze lwafika nasehhovisi lekhansela lakuleya ndawo, akucaci ukuthi idayiswe kanjani.
Ngokuthola kweLANGA, umndeni wakwaMlaba uqale ukuhlala kule ndlu ngo-1969, ngesikhathi kuqala ukwakhiwa kwe-Unit 1 North. Kubikwa ukuthi amanye amalungu omndeni athola imizi ahamba kwasala uMnu Mlaba nahlekisana naye, uNkz Mkhize. Kuthe kulo nyaka, batshelwa ukuthi kuzomele baphume kule ndlu ngoba isidayisiwe.
ILANGA lizifikele mathupha kule ndlu, indlela ebiyonakele ngayo, ubungafunga ukuthi bekufike inkontileka ebizoyibhidliza njengoba bekungakhombisi ukuthi bekuke kwahlala abantu kuyona. “Senginesikhathi eside ngihlala kule ndlu, kumanje kangazi nokuthi sizolalaphi,” kusho uMnu Mlaba.
Uthi phambilini umfowabo wamtshela ukuthi indlu uyayidayisa kanti akazi ukuthi ukwenze kanjani lokho njengoba yindlu yakubo naye.
UMnu Thembinkosi Mkhize, oyilungu le-ward committee kule ndawo, uthe lolu daba luke lwafika kubona kanti kubathusile ukuthi uMnu Mlaba akhishwe ngale ndlela.
“Bake bafika phambilini bezobika lolu daba, sabiza umfowabo lona osolwa ngokudayisa indlu ukuba sizwe ukuthi uyidayise kanjani.
“Inkinga wukuthi amaphepha aveza ukuthi le ndlu ingaphansi kukahulumeni, kwazise ngesikhathi abazali bakhe uBoy beshona, babengakayithengi, okusho ukuthi ibingakabi nalo itayitela.
“Sizame kaningi ukuxhumana nomfowabo kaMnu Mlaba ukuba azosichazela ukuthi uyidayise kanjani le ndlu, kodwa singamtholi,” kusho yena.
Imizamo yokuxhumana nomfowabo kaMnu Mlaba iphelele eboyeni okwezithukuthuku zenja. ILANGA lithole inombolo okuthiwe ngeyenkosikazi yomfowabo kaMnu Mlaba, okuthe uma ishayelwa, oyibambile wathi unguLindiwe. utshele leli phephandaba ukuthi “umyeni” wakhe akekho, usaye eBlomfontein, wathi makathintwe ngoLwesibili ngoba ucingo lwakhe lwangena emanzini.
UMnu Slindelo Mzila okusolwa ukuthi nguyena othenga le ndlu, akafunanga ukuphawula ngodaba lokudayiswa kwayo kodwa uthe yena unamaphepha akhomba ukuthi ibiza uMnu Duncan Mlaba.
“Indaba yokudayiswa komuzi iphakathi kwabantu ababili, ngakho ngeke ngiphawule ngayo, engizokuphendula wukuthi nginamaphepha abhalwe igama likaMnu Mlaba (Duncan) nomkakhe,” kusho yena.
UMnu Mbulelo Baloyi okhulumela uMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu KwaZulu-Natal, uthe le ndlu isabiza uhulumeni, akekho umuntu onelungelo lokuyidayisa.
Uthi uMnu Mlaba kuzomele aye ekhanseleni ukuze lizomsiza ekutheni baxhumane nehhovisi lakwaPropety Management, okuyilona elizoveza ukuthi uhlelo lokushintsha umuzi ukuba uye ngaphansi kothile noma ubize othile emndenini lwagcina kuphi.
UMnu Msawakhe Mayisela okhulumela uMasipala we-Theku, le ndlu engaphansi kwawo, ucele ukuthunyelelwa imibuzo azoyidlulisela eminyangweni ethintekayo, kodwa kuze kwashaya isikhathi sokuloba zingabuyanga izimpendulo.
Previous articleUMosimane wayengaziphuphi engumqeqeshi
Next articleBagxeka abakamasikandi ngokungabeseki